Infrared cooktop FAQ - Zhongshan Amor Eletriki ngwa oru Co., Ltd.
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti Cooktops infrared na Induction
O nwere ike iju gị anya ihe dị iche na infrared na induction cooktops…. Nhọrọ abụọ a adịgo oge ụfọdụ, yabụ iji nyere aka wepu ọgba aghara ọ bụla, ka anyị lelee ma tụlee efere infrared na-ekpo ọkụ na efere ọkụ ọkụ na otu esi esi esi esi nri. Anyị ga-atụle ihe kpatara ịhọrọ na iji ọkụ infrared bụ nhọrọ ka mma ma dịkwa ọnụ ala. Anyị ga-atụle uru nke nri infrared. Ochoo ihu igwe ite infrared ndi kacha ewu ewu?
Gịnị bụ nri infrared?
Infrared nri bụ ụzọ bara uru isi esi nri nri dị mma na ichekwa nri.
Infrared okpomọkụ bụ
Ngwa ngwa esi nri ọtụtụ nri- 3 x ngwa ngwa karịa usoro ọdịnala
Adịghị emepụta okpomọkụ ma na-eme ka kichin gị dị jụụ
Na-esi nri gị esi nri nke ọma, ọ bụghị ntụ oyi ma ọ bụ ntụ oyi
Na-ejigide mmiri dị elu karịa na nri
Osi mmiri ọkụ bụ obere obere - Benchtop cookers, toaster oven na seramiiki cooktops zuru oke maka
kichin, RV, ụgbọ mmiri, ime ụlọ ezumike, maa ụlọikwuu
Infrared BBQ bụ ihe pere mpe iji rụọ ọrụ ma dị ọnụ ala karịa iji gbaa ọsọ
Olee Otú Infrared Cookers Okpomọkụ?
A na-esi na quartz infrared oriọna na-eme infrared cooktops na efere na-echebe metal. A na-ejikarị oriọna ndị ahụ gbaa gburugburu oriọna ndị ahụ iji nye ọbụna okpomọkụ dị egwu. Nke a na-enwu ọkụ na-enyefe okpomọkụ infrared kpọmkwem na ite ahụ. Ga-ahụ cooktops infrared nwere arụmọrụ dị elu karịa ike igwe eletriki site na ugboro atọ karịa ịrụ ọrụ. Uru nke ndị na-esi nri infrared karịa ndị na-esi nri: enwere ike iji ụdị ite na ite ọ bụla. N'iji esi nri esi nri, ị chọrọ cookware pụrụ iche.
Bill Best mepụtara ụlọ ọkụ infrared izizi nke gas na mmalite afọ 1960. Bill bụ onye guzobere Corporationlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Agha ma mee ka ọ bụrụ onye na-ere ọkụ. Ejiri ya mee ihe na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ na-emepụta taya na nnukwu oven iji mee ka agba agba ụgbọ ngwa ngwa.
Ka ọ na-erule 1980s, Bill Best mepụtara ihe seramiiki infrared. Mgbe ọ gbakwunyere ihe ọkụkụ infrared ya nke seramiiki na barbecue ọ rụrụ, ọ chọpụtara infrared okpomọkụ esi nri ngwa ngwa ma jigide ọkwa mmiri dị elu.
Olee otu Infrared Grills Na-arụ Ọrụ?
Infrared okpomọkụ dị adị mgbe niile. Igwe ọkụ infrared na-enweta aha ha site na ihe ndị na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ nke dị ugbu a na isi nke mgbakọ mgbakọ ha. Ihe ndị a na-eme ka ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke na-enyefe nri.
Ugbu a na unyi gị ma ọ bụ gas na-eme ka imi ọkụ, a na-eme ka imi ọkụ ahụ site na-ere ọkụ ma ọ bụ gas nke na-eme ka nri ahụ dị elu site na iji ikuku. Infrared grills na-arụ ọrụ dị iche iche. Ha na-eji ihe eletriki ma ọ bụ gas eme ka elu kpoo elu nke na-ebute ebili mmiri infrared ozugbo na nri dị na efere, efere ma ọ bụ imi ihe.
Gini bu nri nri
Nmeputa nri bu uzo ohuru iji kpo oku nri. Ndị na-esi nri na-ekpo ọkụ na-eji electromagnets eme ihe na-emegide nkwanye ọkụ iji kpoo ite ahụ ọkụ. Ndị osi ite a anaghị eji ihe ọ bụla kpo oku ekpochapu ọkụ kama ọ na-eme ka arịa ahụ kpoo ọkụ ọkụ nke ọma site na mbara igwe. Igwe electromagnetic na-enyefe ugbu a ozugbo na cookware magnetik, na-eme ka ọ kpoo ọkụ- nke nwere ike ịbụ ite gị ma ọ bụ pan.
Uru nke a bụ ịbịaru oke okpomọkụ dị oke ọsọ na njikwa ọkụ ọkụ ozugbo. Nri esi nri nwere ọtụtụ uru maka ndị na-eri ya. Otu n’ime ihe ndị a bụ ite nri anaghị ekpo ọkụ, na-ebelata ohere nke ịgba ọkụ na kichin.
Kedu ka esi esi nri na-arụ ọrụ?
Ndị na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ na-eji wiwi ọla kọpa tinye n'okpuru arịa nri wee mechie eriri magnetik ọzọ site na waya. Uzo ozo di ugbu a putara ihe na-agbanwe agbanwe. Ugbu a na-emepụta oghere magnet na-agbanwe agbanwe nke ga-ewepụta ụzọ na-enweghị isi.
Nwere ike tinye aka gị n’elu iko ahụ, ị ​​gaghị enwe ihe ọ bụla. Etinyela aka gị na nke e jiri mee nri n’oge na-adịbeghị anya n’ihi na ọ ga-ekpo ọkụ!
Esi nri nke kwesịrị ekwesị maka ihe ọkụkụ na-emepụta site na ọla dị iche iche dị ka iron ma ọ bụ igwe anaghị agba. Nye gị jiri ferromagnetic disk, ọla kọpa, iko, aluminom, na enweghị magnetic, enwere ike iji igwe anaghị agba nchara.
Gini mere Infrared ji esi ka mma? Infrared Hot Plate VS Ntinye
Ndị mmadụ na-ajụkarị ajụjụ nke “infrared hot plate vs induction” mgbe a bịara n’ihe metụtara ike ojiji. Ndị na-esi nri infrared na-eji ihe dịka 1/3 obere ike karịa ụdị nri ọ bụla ma ọ bụ grills. Infrared burners na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, na-amịpụta okpomọkụ dị elu karịa ihe imi gị mgbe niile ma ọ bụ na-esi nri. Fọdụ ndị na-esi nri infrared nwere ike iru 980 Celsius na 30 sekọnd ma nwee ike mechaa esiji anụ gị na nkeji abụọ. Nke ahụ dị oke ọsọ.
Infrared ndị na-esi nri na BBQ grills dị mfe karịa iji dozie ya. Chee echiche banyere ọgbaghara niile site na oge ikpeazụ ị jiri ọkụ griin ma ọ bụ icheku ọkụ…. All splatters nke a ga-ehicha…. Ihe ndị a na-etinye na seramiiki na BBQ infrared dị mkpa ka ehichapụ ya na nnukwu efere nke ihe ọkụkụ benchtop na-aga na asacha efere.
Uru Infrared Nri?
Infrared nri na-eme ka o doo anya na a na-ekesa ikpo oku n'ofe isi nri. Igwe na-enwu gbaa na-abanye n'ime nri gị nke ọma ma hụ na mmiri ahụ dị elu ga-adị elu.
Ndị na-esi nri infrared na-ekpo ọkụ ngwa ngwa. Anyị na-atụ aro ka ị lelee nri anya nke ọma ma belata okpomọkụ mgbe ọ dị mkpa. Kwesịrị ịhọrọ onye na-esi nri infrared nke nwere ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche.
Ọ dị mma maka gburugburu ebe obibi
Ndị na-esi nri infrared na grills na-eji ihe dị ka pasent 30 dị obere karịa ọkụ eletrik, gas ma ọ bụ icheku ọkụ gị. Nke a na-echekwa gị ego ma na-enyere gburugburu ebe obibi aka. Chọpụta nke 5 infrared grills bụ ndị kachasị ewu ewu ebe a
N'ihi na infrared grills na-ekpo ọkụ kachasị ọsọ, ha na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa. Nwere ike imi barbecue, anụ anụ, sie nri ma mee ihe niile ịchọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro atọ karịa ngwa nri oge niile.
Kedu ụdị ọsọ ọsọ ndị na-esi nri infrared?
Ndị na-esi nri infrared nwere ike ịrịgo ihe karịrị 800 Celsius na 30 sekọnd. Nke ahụ bụ oke ọsọ ha. Dabere na ihe nlereanya na ụdị nke N'ezie, ị nwere ike nweta ụfọdụ iji nwayọọ na ụdị. Rịba ama na isi ihe niile na-ebufe okpomọkụ na infrared bụ n'ihi ọsọ.
Ndị na-ere ọkụ gas na ndị na-ere ọkụ na-ere ọkụ ga-achọ ka ekpughere gị na arịa nri gị wee chere ka ụgbọ ahụ kpoo ọkụ tupu ọnọdụ okpomọkụ ahụ abawanye. Infrared surfaces tinye okpomọkụ na arịa gị na-esi nri ngwa ngwa o kwere mee ma chebe nri gị pụọ na mmebi. Were ya na ị na-esi anụ ị na-eji esi nri n’ime naanị minit iri ma nweta ya ka ụtọ oge niile. Nwekwara ike ịlele ịchọpụta ihe ị na-eme n'ọkụ
Chọrọ Ngwá Ọrụ Pụrụ Iche?
Don'tchọghị cookware pụrụ iche dịka anyị kwuru. Dị nnọọ ka mgbe osikapa i nwere ike inwe tọn ngwa nke ị nwere ike dị mkpa ezie na .. .. Dị ka pụrụ iche oké iko ọkwá gị cooker.
Mmechi nke Gini bu ihe di iche na etiti Infrared na Induction Cooktops
Infrared Cooking na Induction Cooking bụcha ụzọ dị ukwuu esi esi nri. Infrared na-enyekwu abamuru ka nri gị na-agba ọkụ ngwa ngwa n’achọghị ntụ na anwụrụ ọkụ. Ndị na-esi nri infrared dịkwa mma maka gburugburu ebe obibi - na-enyere anyị aka iji obere mmanụ ọkụ mepụta okpomọkụ.